प्रदेश १ बाट थप १८ जना ‘डिस्चार्ज’ - News Birat
प्रदेश १ बाट थप १८ जना ‘डिस्चार्ज’
विराटनगर, जेठ २०–प्रदेश १ बाट थप १८ जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । सुनसरीको धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गराइरहेका झापाका १७ जना पुरुष र सुनसरीकी एक महिला कोरोनामुक्त भएका हुन् ।
स्वाब परीक्षणमा नेगेटिभ आएपछि उनीहरुलाई डिस्चार्ज गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाका अनुसार डिस्चार्ज हुनेहरु १७ देखि ५२ वर्ष उमेर समूहका छन् ।
डिस्चार्ज हुनेहरुलाई धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राई, प्रतिष्ठानका निर्देशक गौरीशंकर साह, सहायक निर्देशक डा. विकास साहलगायतले पुष्पगुच्छा दिएर बिदाई गरेका थिए । योसँगै प्रदेश १ मा कोरोनाबाट मुक्त हुनेहरुको संख्या ४८ पुगेको छ ।
विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालको कोभिड १९ उपचार केन्द्रबाट पटक–पटक गरी ३० जना डिस्चार्ज भएका छन् । सोमबारसम्म प्रदेश १ मा १६७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये ८० जना बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा र ३९ जना विराटनगरको कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्रमा उपचाररत छन् ।
कोराना जितेर डिस्चार्ज भएका अयुब मियाँले सरकार र प्रतिष्ठानका चिकित्सक, नर्सका कारण आफूहरु कोराना जित्न सफल भएको भन्दै सरकार र उपचारमा संलग्न सबैलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
मंगलवार, २० जेष्ठ २०७७, १३:२५ June 2, 2020 मा प्रकाशित
नोना कोइराला स्मृति दिवसमा ३५ सुत्केरीलाई न्यानो कपडा र पौषिलो खाना वितरण
ग्रामथानमा चौतारा निर्माण गरि समुदायलाई हस्तान्तरण
पारिश्रमिक नपाएको भन्दै मनमोहन मेमोरियल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित